Toogasho lagu dilay shacab ku sugnaa suuq ku yaala France – Radio Daljir
Diseenbar 12, 2018 4:33 b 0
Nin hubaysan ayaa toogasho ku dilay ku dhowaad sadex qof, waxaana uu dhaawacay 12 qof oo kalle, goob u dhow suuq dadka Kirishtaanka ay ka adeegtaan magaalada Strasbourg, sida uu xaqiijiyay wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska Christophe Castaner.
Jahwareer ayaa dhacay kadib markii weerarka uu gaystay qof hubaysan abaare 8dii habeenimo xiliga weerarka uu dhacay, dadkuna waa ay kala carareen, waxaana ay ka mid tahay waddooyinka ugu mashquulka badan ee magaalada.
Wasiirka arrimaha gudaha ayaa sheegay ninka weerarka gaystay in ciidamada ammaanka ay rasaas ay iswaydaarsadeen, isagoona baxsaday.
“Dowladda waxaa ay sare u qaaday arrimaha ammaanka oo la gaarsiiyay heerkii ugu sareeyey” Castaner ayaa sidaasi sheegay.
Macadda sababta weerarka ka dambaysay, waxaana xogaha booliska uu helayo sheegayaan in qofka weerarka gaystay da’diisu ay tahay 29 sano jir, waxaana socda baaritaano.